မေမေတို့ သိထားရမယ့် ကလေးအိပ်စက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်သော သိကောင်းစရာများ - Chit MayMay
Home Child Care မေမေတို့ သိထားရမယ့် ကလေးအိပ်စက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်သော သိကောင်းစရာများ
မိဘတစ်ဦးဖြစ်လာခြင်းဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သလို လက်တွေ့သင်ခန်းစာမရှိတဲ့ အသစ်စက်စက် စွန့်စားမှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘအများစု ကြုံတွေရတဲ့အခက်ခဲဆုံးအချိန်တစ်ခုကတော့ ကလေးရဲ့အိပ်ချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ဟာ မိဘတွေအနားယူရတဲ့အချိန်ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကလေးကို ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် အိပ်ပျော်စေဖို့နှင့် သင့်ကလေးကို ညဘက်မှာ ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေဖို့ ကူညီပေးလိမ့်မယ့် အကြံပေးချက်တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ အနှီးဖြင့် နွေးနွေးထွေးထွေး ထုပ်ထားပေးပါ
ကလေးတွေမှာ မွေးကင်းစကနေ ၆လအထိဖြစ်ပျက်တဲ့ အလိုအလျောက်ထိတ်လန့်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို ကြုံတွေကြရပါတယ်။ ဒီတုံ့ပြန်မှုက အိပ်ပျော်ခါနီးမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ရုတ်တရက် လက်တွေ ဆက်ခနဲ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်ပြီး သူတို့ကိုနောက်ဆုံးမှာ နိုးသွားစေတဲ့ ပြုတ်ကျသွားသလို ခံစားရတဲ့ အာရုံခံစားမှုကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။
ကလေးကို အနှီးတင်းတင်းထုပ်ထားခြင်းက ဆက်ခနဲလှုပ်ရှားမှုကို ရှောင်ရှားဖို့ ကူညီနိုင်သလို ချောချောမွေ့မွေ့ အိပ်ပျော်စေပါလိမ့်မယ်။
၂။ သင့်ကလေးကို နေ့နဲ့ညအကြား ခွဲခြားနိုင်စေဖို့ dimmers ကိုသုံးပါ
Adorable newborn baby boy, sleeping in crib at night. Little boy in white pajamas takinganap in dark room. Bedroom interiоr with lamp and teddy bear in the background
သင့်ကလေးရဲ့ ညဘက် အိပ်စက်မှုအတွက် ပုံသေအိပ်ချိန်တစ်ခု သင်ပေးရခြင်းက ကြီးမားတဲ့ တာဝန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကလေးဟာပုံမှန်အိပ်စက်မှု အလေ့အကျင့်ရသွားလျှင် မိခင်အတွက်လည်း ညဘက်မှာ ကောင်းကောင်းအိပ်လို့ရမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အိမ်ထဲက ညအိပ်မီးနှင့် မီးလုံးတွေမှာ မီးအလင်းအမှောင်ကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ dimmer အသုံးပြုခြင်းက သင့်ကလေးရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်စည်းချက်ကို ထိန်းညှိပြီး သင့်ကလေးရဲ့ အိပ်စက်ဖို့အချိန်ကို အချက်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
၃။ သင့်ကလေးကို ညစဉ်ပုံမှန် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ချိုးပေးပါ
အိပ်ရာထဲကို မဝင်ခင် ရေနွေးနဲ့ချိုးပေးခြင်းက လူတိုင်းအတွက် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကလေးကို ညဘက်မှာ ပုံမှန်ရေးနွေးနွေးလေးနဲ့ ချိုးပေးပြီး ဒိုက်ပါ အနှီးအသစ်လဲပေးပါ။ တစ်ညလုံး ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေမှာပါ။
၄။ ကလေးရဲ့အခန်းအပူချိန်ကို ထိန်းညှိပါ
Dr. Alan Green ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာ မွေးကင်းစကလေးကို အိပ်ပျော်စေဖို့ အကောင်းဆုံးအပူချိန်က ၆၅ကနေ ၇၀ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကလေးအခန်းရဲ့အပူချိန်ကို နည်းနည်းလျော့ထားခြင်းက သင့်ကလေးကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်အိပ်ပျော်စေပါလိမ့်မယ်။ ပန်ကာကို အနိမ့်ဆုံးအရှိန်ဖြင့် ဖွင့်ပေးထားခြင်း သို့မဟုတ် ပြတင်းပေါက်ကို နည်းနည်းဖွင့်ပေးထားခြင်းက သင့်ကလေးအိပ်ပျော်စေဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အေးတဲ့ရာသီဆိုရင်တော့ ဖွင့်ထားစရာမလိုပါဘူးနော်။
၅။ တစ်ညလုံး ဒိုက်ပါပြောင်းလဲမှုတွေကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ ကြိုတင်စီစဉ်ထားပါ
ဒိုက်ပါလဲပေးခြင်းက သင့်ကလေးကို ညဘက်မှာ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေပါတယ်။ ဒိုက်ပါထဲမှာ သေးစိုနေရင် ကလေးကောင်းကောင်းအိပ်မရတာကို ဖြစ်စေတာကြောင့်ပါ။ ညသန်းခေါင် နို့မတိုက်ခင်မှာ သင့်ကလေးရဲ့ ဒိုက်ပါကို လဲပေးပါ။ အနှီးနွေးနွေးထွေးထွေးလေးနဲ့ ပြန်အိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကို နို့တိုက်ပြီးမှ ဒိုက်ပါလဲရင် အပြည့်အဝနိုးသွားပြီး ပြန်အိပ်ပျော်ဖို့ ကြာသွားပါလိမ့်မယ်။
၆။ ကလေးကို နို့တိုက်နေဆဲဖြစ်ပါက ကဖိန်းဓါတ်သောက်သုံးမှုကို ဖြတ်ပါ
ဆိုဒါတွေ၊ ကော်ဖီတွေကတဆင့် ကဖိန်းဓါတ်က များသောအားဖြင့် ကလေးရဲ့ဆီးထဲမှာ မြုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ကဖိန်းဓါတ် သောက်သုံးမှု မြင့်မားခြင်းက သင့်ကလေးကို စိတ်တိုလွယ်တာ၊ ဂျီကျတာ ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။
တစ်နေ့တာအတွင်း လက်ဖက်ရည် သို့မဟုတ် Soda ၊ ချောကလက်တွေ အနည်းငယ်ပိုစားသုံးမိခင်လျှင် သင့်ကလေးရဲ့ စိတ်အပြောင်းအလဲကို အနီးကပ်သတိထားပေးပါ။ ကလေးနို့မပြတ်သေးခင်မှာ ကဖိန်းဓါတ်တွေ မရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါက အနည်းငယ်သာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ပထမ ၆လမှာ သင့်ကလေးကို သင်နဲ့အနီးကပ် အိပ်စေဖို့ ဦးစားပေးရပါမယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကလေးပုခက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကလေးပုခက်ကို မိဘတွေကုတင်ဘေးမှာ တွဲထားနိုင်သလို ဘေးမှာ အကာအရံတွေလည်း ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ မိဘဘေးမှာ အိပ်နေရသလို နွေးထွေးပြီး လုံခြုံမှုကို ခံစားရစေမှာပါ။
၈။ သင့်ကလေးအိပ်ပျော်စေဖို့ ချော့သိပ်နေစဉ်အတွင်း မျက်လုံးချင်းမဆုံအောင် နေပါ
ကလေးတွေ ပထမဆုံး သင်ယူတဲ့အရာတွေကတော့ သူတို့နားက လူတွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ဆက်သွယ်ဖို့ မျက်လုံးချင်းဆုံအောင်ပြုလုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးနဲ့အတူ မျက်လုံးချင်းဆုံစေခြင်းက ကလေးနှလုံးခုန်နှုန်းကို တိုးပွားစေတဲ့ oxytocin ဆိုတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟော်မုန်းကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ သူတို့ကို အိပ်ပျော်စေဖို့ ပွေ့ပြီးချော့သိပ်နေစဉ်အတွင်း သင့်ကလေးနဲ့ မျက်လုံးဆုံအောင် ကြည့်ခြင်းဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် သက်ရောက်မှုလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
၉။ သူတို့ကို နို့တိုက်ဖို့အတွက် နှိုးသင့်ပါသလား
Mummy lulling baby to sleep
မိဘအများစုက အိပ်ပျော်နေတဲ့ ကလေးကို ဘယ်တော့မှ မနှိုးရက်ကြပါဘူး။ သို့သော်လည်း သင့်ကလေးဟာ နို့စို့မယ့်အချိန်ကျော်အောင် အိပ်နေရင်၊ နောက်ဆုံး ၃နာရီထဲက ဘာမှ မစားရသေးလျှင် ကလေးကို နှိုးလို့ရပါတယ်။ ဒါက ကလေးပုံမှန်အိပ်ချိန်ကို မှန်ကန်စေယုံသာမက ညနေခင်းမှာလည်း ဂျီမကျစေဖို့ သေချာပါတယ်။
၁၀။ သင့်ကလေးအိပ်ပျော်စေဖို့ အကောင်းဆုံးက ဘာလဲဆိုတာ ရှာဖွေပါ
ကလေးတွေက သူတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်နဲ့ မကြိုက်တာတွေ ရှိပါတယ်။ သင့်ကလေးကို ဘယ်လိုအိပ်ရမယ်ဆိုတာ ပုံသေမထားပါနဲ့။ သူတို့ဘယ်လိုအိပ်ရတာနှစ်သက်သလဲဆိုတာ ရှာဖွေပါ။
၉။ အိပ်ရာမဝင်ခင်အချိန်မှာ သင့်ကလေးရဲ့ စခရင်ကြည့်ချိန်ကို ကန့်သတ်ပါ
သင့်ကလေးကို ညအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ တီဗီပေးကြည့်တာ၊ ဖုန်းပေးကြည့်တာက မကောင်းပါဘူး။ သူတို့အိပ်ချိန်မတိုင်ခင် ၁နာရီ ၊၂နာရီလောက်ထဲက စခရင်တွေနဲ့ ဝေးဝေးထားတာက သင့်ကလေးကို ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
မမေတေို့ သိထားရမယျ့ ကလေးအိပျစကျခွငျးနဲ့ ပတျသတျသော သိကောငျးစရာမြား
မိဘတဈဦးဖွဈလာခွငျးဟာ မင်ျဂလာတဈပါးဖွဈပါတယျ။ ဒါက စိနျချေါမှုတဈခု ဖွဈနိုငျသလို လကျတှသေ့ငျခနျးစာမရှိတဲ့ အသဈစကျစကျ စှနျ့စားမှုတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ မိဘအမြားစု ကွုံတှရေတဲ့အခကျခဲဆုံးအခြိနျတဈခုကတော့ ကလေးရဲ့အိပျခြိနျပဲဖွဈပါတယျ။ ကလေးအိပျပြျောတဲ့အခြိနျဟာ မိဘတှအေနားယူရတဲ့အခြိနျပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ကလေးကို ပိုပွီး မွနျမွနျဆနျဆနျ အိပျပြျောစဖေို့နှငျ့ သငျ့ကလေးကို ညဘကျမှာ ကောငျးကောငျး အိပျပြျောစဖေို့ ကူညီပေးလိမျ့မယျ့ အကွံပေးခကျြတဈခြို့ကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
၁။ အနှီးဖွငျ့ နှေးနှေးထှေးထှေး ထုပျထားပေးပါ
ကလေးတှမှော မှေးကငျးစကနေ ၆လအထိဖွဈပကျြတဲ့ အလိုအလြောကျထိတျလနျ့တဲ့ တုံ့ပွနျမှုကို ကွုံတှကွေရပါတယျ။ ဒီတုံ့ပွနျမှုက အိပျပြျောခါနီးမှာဖွဈတတျတဲ့ ရုတျတရကျ လကျတှေ ဆကျခနဲ လှုပျရှားမှုဖွဈပျေါပွီး သူတို့ကိုနောကျဆုံးမှာ နိုးသှားစတေဲ့ ပွုတျကသြှားသလို ခံစားရတဲ့ အာရုံခံစားမှုကွောငျ့ ဖွဈရတာပါ။
ကလေးကို အနှီးတငျးတငျးထုပျထားခွငျးက ဆကျခနဲလှုပျရှားမှုကို ရှောငျရှားဖို့ ကူညီနိုငျသလို ခြောခြောမှမှေ့ေ့ အိပျပြျောစပေါလိမျ့မယျ။
၂။ သငျ့ကလေးကို နနေဲ့ညအကွား ခှဲခွားနိုငျစဖေို့ dimmers ကိုသုံးပါ
သငျ့ကလေးရဲ့ ညဘကျ အိပျစကျမှုအတှကျ ပုံသအေိပျခြိနျတဈခု သငျပေးရခွငျးက ကွီးမားတဲ့ တာဝနျတဈခုဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ကလေးဟာပုံမှနျအိပျစကျမှု အလအေ့ကငျြ့ရသှားလြှငျ မိခငျအတှကျလညျး ညဘကျမှာ ကောငျးကောငျးအိပျလို့ရမှာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့အိမျထဲက ညအိပျမီးနှငျ့ မီးလုံးတှမှော မီးအလငျးအမှောငျကို ထိနျးခြုပျပေးတဲ့ dimmer အသုံးပွုခွငျးက သငျ့ကလေးရဲ့ ဇီဝဖွဈစဉျစညျးခကျြကို ထိနျးညှိပွီး သငျ့ကလေးရဲ့ အိပျစကျဖို့အခြိနျကို အခကျြပွပေးပါလိမျ့မယျ။
၃။ သငျ့ကလေးကို ညစဉျပုံမှနျ ရနှေေးနှေးလေးနဲ့ ခြိုးပေးပါ
အိပျရာထဲကို မဝငျခငျ ရနှေေးနဲ့ခြိုးပေးခွငျးက လူတိုငျးအတှကျ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျပြျောစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ကလေးကို ညဘကျမှာ ပုံမှနျရေးနှေးနှေးလေးနဲ့ ခြိုးပေးပွီး ဒိုကျပါ အနှီးအသဈလဲပေးပါ။ တဈညလုံး ကောငျးကောငျးအိပျပြျောစမှောပါ။
၄။ ကလေးရဲ့အခနျးအပူခြိနျကို ထိနျးညှိပါ
Dr. Alan Green ရဲ့စာအုပျထဲမှာ မှေးကငျးစကလေးကို အိပျပြျောစဖေို့ အကောငျးဆုံးအပူခြိနျက ၆၅ကနေ ရ၀ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။ ကလေးအခနျးရဲ့အပူခြိနျကို နညျးနညျးလြော့ထားခွငျးက သငျ့ကလေးကို မွနျမွနျဆနျဆနျအိပျပြျောစပေါလိမျ့မယျ။ ပနျကာကို အနိမျ့ဆုံးအရှိနျဖွငျ့ ဖှငျ့ပေးထားခွငျး သို့မဟုတျ ပွတငျးပေါကျကို နညျးနညျးဖှငျ့ပေးထားခွငျးက သငျ့ကလေးအိပျပြျောစဖေို့ ကူညီနိုငျပါတယျ။ အေးတဲ့ရာသီဆိုရငျတော့ ဖှငျ့ထားစရာမလိုပါဘူးနျော။
၅။ တဈညလုံး ဒိုကျပါပွောငျးလဲမှုတှကေို လိမ်မာပါးနပျစှာ ကွိုတငျစီစဉျထားပါ
ဒိုကျပါလဲပေးခွငျးက သငျ့ကလေးကို ညဘကျမှာ ကောငျးကောငျးအိပျပြျေျာစပေါတယျ။ ဒိုကျပါထဲမှာ သေးစိုနရေငျ ကလေးကောငျးကောငျးအိပျမရတာကို ဖွဈစတောကွောငျ့ပါ။ ညသနျးခေါငျ နို့မတိုကျခငျမှာ သငျ့ကလေးရဲ့ ဒိုကျပါကို လဲပေးပါ။ အနှီးနှေးနှေးထှေးထှေးလေးနဲ့ ပွနျအိပျပြျောသှားပါလိမျ့မယျ။ သူတို့ကို နို့တိုကျပွီးမှ ဒိုကျပါလဲရငျ အပွညျ့အဝနိုးသှားပွီး ပွနျအိပျပြျောဖို့ ကွာသှားပါလိမျ့မယျ။
၆။ ကလေးကို နို့တိုကျနဆေဲဖွဈပါက ကဖိနျးဓါတျသောကျသုံးမှုကို ဖွတျပါ
ဆိုဒါတှေ၊ ကျောဖီတှကေတဆငျ့ ကဖိနျးဓါတျက မြားသောအားဖွငျ့ ကလေးရဲ့ဆီးထဲမှာ မွုပျနတေတျပါတယျ။ ကဖိနျးဓါတျ သောကျသုံးမှု မွငျ့မားခွငျးက သငျ့ကလေးကို စိတျတိုလှယျတာ၊ ဂြီကတြာ ဖွဈပျေါစပေါလိမျ့မယျ။
တဈနတေ့ာအတှငျး လကျဖကျရညျ သို့မဟုတျ Soda ၊ ခြောကလကျတှေ အနညျးငယျပိုစားသုံးမိခငျလြှငျ သငျ့ကလေးရဲ့ စိတျအပွောငျးအလဲကို အနီးကပျသတိထားပေးပါ။ ကလေးနို့မပွတျသေးခငျမှာ ကဖိနျးဓါတျတှေ မရှောငျကွဉျနိုငျပါက အနညျးငယျသာ သောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။
ပထမ ၆လမှာ သငျ့ကလေးကို သငျနဲ့အနီးကပျ အိပျစဖေို့ ဦးစားပေးရပါမယျ။ နောကျပိုငျးမှာ ကလေးပုခကျကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ကလေးပုခကျကို မိဘတှကေုတငျဘေးမှာ တှဲထားနိုငျသလို ဘေးမှာ အကာအရံတှလေညျး ရှိဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါမှသာ မိဘဘေးမှာ အိပျနရေသလို နှေးထှေးပွီး လုံခွုံမှုကို ခံစားရစမှောပါ။
၈။ သငျ့ကလေးအိပျပြျောစဖေို့ ခြော့သိပျနစေဉျအတှငျး မကျြလုံးခငျြးမဆုံအောငျ နပေါ
ကလေးတှေ ပထမဆုံး သငျယူတဲ့အရာတှကေတော့ သူတို့နားက လူတှကေို အသိအမှတျပွုပွီး ဆကျသှယျဖို့ မကျြလုံးခငျြးဆုံအောငျပွုလုပျဖို့ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့ကလေးနဲ့အတူ မကျြလုံးခငျြးဆုံစခွေငျးက ကလေးနှလုံးခုနျနှုနျးကို တိုးပှားစတေဲ့ oxytocin ဆိုတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာဟျောမုနျးကို ထုတျလှတျပေးပါတယျ။ သူတို့ကို အိပျပြျောစဖေို့ ပှပွေီ့းခြော့သိပျနစေဉျအတှငျး သငျ့ကလေးနဲ့ မကျြလုံးဆုံအောငျ ကွညျ့ခွငျးဟာ ဆနျ့ကငျြဘကျ သကျရောကျမှုလညျး ရှိနိုငျပါတယျ။
၉။ သူတို့ကို နို့တိုကျဖို့အတှကျ နှိုးသငျ့ပါသလား
မိဘအမြားစုက အိပျပြျောနတေဲ့ ကလေးကို ဘယျတော့မှ မနှိုးရကျကွပါဘူး။ သို့သျောလညျး သငျ့ကလေးဟာ နို့စို့မယျ့အခြိနျကြျောအောငျ အိပျနရေငျ၊ နောကျဆုံး ၃နာရီထဲက ဘာမှ မစားရသေးလြှငျ ကလေးကို နှိုးလို့ရပါတယျ။ ဒါက ကလေးပုံမှနျအိပျခြိနျကို မှနျကနျစယေုံသာမက ညနခေငျးမှာလညျး ဂြီမကစြဖေို့ သခြောပါတယျ။
၁၀။ သငျ့ကလေးအိပျပြျောစဖေို့ အကောငျးဆုံးက ဘာလဲဆိုတာ ရှာဖှပေါ
ကလေးတှကေ သူတို့မှာ ကိုယျပိုငျအကွိုကျနဲ့ မကွိုကျတာတှေ ရှိပါတယျ။ သငျ့ကလေးကို ဘယျလိုအိပျရမယျဆိုတာ ပုံသမေထားပါနဲ့။ သူတို့ဘယျလိုအိပျရတာနှဈသကျသလဲဆိုတာ ရှာဖှပေါ။
၉။ အိပျရာမဝငျခငျအခြိနျမှာ သငျ့ကလေးရဲ့ စခရငျကွညျ့ခြိနျကို ကနျ့သတျပါ
သငျ့ကလေးကို ညအိပျရာမဝငျခငျမှာ တီဗီပေးကွညျ့တာ၊ ဖုနျးပေးကွညျ့တာက မကောငျးပါဘူး။ သူတို့အိပျခြိနျမတိုငျခငျ ၁နာရီ ၊၂နာရီလောကျထဲက စခရငျတှနေဲ့ ဝေးဝေးထားတာက သငျ့ကလေးကို ကောငျးကောငျး အိပျပြျောစဖေို့ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။
Previous articleကလေးတွေကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်အပြစ်ပေးခြင်းရဲ့ ဆိုးရွားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
Next articleကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း မေမေတို့ရဲ့ ဘေဘီလေး ပျော်ရွင်နေစေဖို့ နည်းလမ်း (၃)ခု